नेपाली टेलिसिरियल भद्रगोलका फ्यानहरुलाई अत्यन्तै दुखत खबर : अब भद्रगोल सधाको लागि बन्द ! हेर्नुहोस भद्रगोल टिम के भन्छन – पुरा पढ्नुहोस्……
नेपाली टेलिसिरियल भद्रगोलका फ्यानहरुलाई अत्यन्तै दुखत खबर : अब भद्रगोल सधाको लागि बन्द ! हेर्नुहोस भद्रगोल टिम के भन्छन
माघ, काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको हाँस्य टेलिश्रृंखला भद्रगोलको प्रसारण रोकिने भएको छ । नेपाली हाँस्य टेलिसिरियल मध्येकै चर्चित तथा लोकप्रियमा गनिएको भद्रगोल रोकिनुको मुख्य कारण मिडिया हव प्रा.ली बनेको भद्रगोलका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले बताएका छन् ।
भद्रगोल गएको शुक्रबार १५७ भाग सम्म प्रसारण भएको थियो । पछिल्लो समय समाजका चासोको बिषयलाई मनोरञ्जनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्दै आएको भद्रगोल नेपाली युट्युव ट्रेडिङको शिर्षस्थानमा पनि धेरैपटक आइरहेको छ । यो भन्दा अघि अन्य हाँस्य टेलिसिरियल पनि यसैगरी बन्द हुँदै आएका छन् ।
मेरिबास्सै, जिरे खुर्सानी, तितोसत्य लगायतका लोकप्रिय टेलिसिरियलहरु पनि बन्द भएका थिए । मेरिबास्सै र जिरे खुर्सानी पुनः प्रसारण हुन थालेका छन् भने तितोसत्य सधैंका लागी बन्द भयो । भद्रगोल बन्द भएको बिषयमा मिडिया हवका सञ्चालक सोम धितालसँग कुरा गर्दा भद्रगोल बन्द नहुने बताउँछन् ।
उनले भद्रगोलका कलाकार तथा निर्देशकले बन्द गर्छु भन्दैमा बन्द गर्न नसक्ने बताए । ‘अर्जुन जीले बन्द गर्छु भन्दैमा कसरी बन्द हुन्छ ? यहि उहाँले गर्नुहुन्न भने अन्य कलाकार राखेर भएपनि हामी (मिडिया हव)ले बनाउँछौं । ढुक्क हुनुस बन्द हुँदैन ।’, धितालले भने । अपडेटः भद्रगोलका कलकार तथा निर्देशक अर्जुन घिमिरेले फेसबुकमा राखेको स्टाटस १० मिनेट नहुँदै हटाइसकिएको छ ।
Prevदुबईमा नेपाली कामदारहरुको लागि दुबई सरकारको नया नियम … अब यस्तो परिबतन पुरा विवरण हेर्नुहोस
Nextचीन नेपालको धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार … यस्तो छ चिनको योजना
घरमा पुगेर मन छुने यस्तो गित गाय अशोक दर्जिले ,बाँसको घरमा बस्नु पर्ने बाध्यता टुकिको साथमा( भिडियो सहित)
निरन्तर बढिरहेको सुनको भाऊ आज यस्तो छ…
आजको राशिफलः बि.स. २०७५ साल माघ २४ गते बिहीबार इश्वी सन् २०१९ फेब्रुवरी ७ तारीख माघ शुक्लपक्ष तृतीया तिथी…
टिकटकमा भाईरल ट्वीन्स प्रिस्मा र प्रिन्सीको भिडियोले कमायो पन्द्र लाख, अझ्झै दोश्रो स्थान कब्जा-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)